Uma indoda ingakuthandi iziphatha kanjani | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 26/05/2022 18:15 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izithandani Nezocansi
Ingabe usunesikhathi ubukele? ubudlelwano bakho abusebenzi kahle? Ingabe liyawohloka futhi awukwazi ukuthola izimbangela? Mhlawumbe umlingani wakho akasazizwa ngendlela efanayo futhi lokho kuyisihluthulelo sokuziphatha okuthile kube yingozi. Uma indoda ingakuthandi iziphatha kanjani?
Kulezi zimo kungcono kakhulu thembela emuzweni wemvelo futhi wethembe izimpawu. Kodwa eziningi zalezi zibonakaliso ziyakhungatheka lapho lelofu lokungaqiniseki livimbela indlela yokubuka kancane okusobala. Okokuqala nje, kumelwe singathathi hlangothi futhi sizinakekele kahle, singavumeli okuthile kukwehlule ngaphambi kokuthatha izinqumo ezinqala.
1 Kungani uzwa sengathi akakuthandi?
2 Uma indoda ingasakuthandi iziphatha kanjani?
2.1 Akakuthembi njengakuqala
2.2 Awuzizwa kahle eduze kwakhe
2.3 uhlale ecasukile
2.4 ungabi naso isikhathi sakho
2.5 Awuseyona into ebaluleke kakhulu kubo
2.6 Izinhlelo zesikhathi esizayo ziyashabalala
Kungani uzwa sengathi akakuthandi?
Lapho kunobufakazi bokuthi akasakuthandi, kungase kubonakale kungaphezu kokusobala. Nokho, ngezinye izikhathi siyamangala ukwazi ukuthi lokhu kunjalo, kusukela Ungaba ngumuntu ongenalwazi futhi unganikezi umkhondo.
Ngokuvamile Into yokuqala ebonwayo wukunganaki, njengoba leyo mininingwane noma imibukiso yothando ebilokhu ikhona iyalahleka. Isimo sakhe sengqondo asinalo uthando noma lapho singasho khona ukuthi izenzo zakhe eziphathelene nothando sezibuthakathaka kakade.
Uma indoda ingasakuthandi iziphatha kanjani?
Imininingwane ingaba miningi, okuvame ukugqama ukuthi nini akusakubandakanyi ezinqumweni zabo ezibaluleke kakhulu. Uma kunemigomo, bahlale bexoxisana nabalingani babo, okungenani uma bebalulekile.
Ukungamethembi kungenye yezimpawu. Uma umuntu ethembekile, uhlale enothando nokwethemba omunye umuntu, ngaphezu kwalokho, ubuhlobo abukwazi ukugcinwa ngokuhamba kwesikhathi uma kungekho kuhlobana nokuvikeleka okunjalo.
Awuzizwa kahle eduze kwakhe
Kunamaphuzu amaningi ahlanganisa lo mbuzo othakazelisayo. Uma ungasazizwa kahle uma useduze kwakhe, kuyoba yilokho Awuyizwa leyo nduduzo, njengoba ukuphawula kwakho kungekuhle noma kungemnandi.
Uma engakujabuleli, nawe awukujabuleli ukuba naye, kodwa into eyodwa eyenzekayo, awusazizwa ukhululekile njengomuntu. Impela ukuphawula onakho akusekho okuhle futhi lokho akwenzi ubudlelwano buguquke.
Uma ukuphawula kungalungile, konke okunye kuhlanganisa i-aura enobuthi. Impela zonke izincazelo kunalokho zimbi ukuvusa ingxoxo. Uma esesimweni esibi kuphela lapho enawe noma zama ukuthola ukulwa ngokwengqondo, akulona uphawu oluhle.
Kungaphawulwa ukuthi izingxoxo azikaze zibe zinhle. Mhlawumbe lapho ngaphambi kokuba kube nengxoxo kunenye, kungase kube okuphambene. Uma kungasekho ukulwa noma izingxabano azikho futhi kungaba uphawu olubi, Njengoba ukuze ubuhlobo buchume, ukungezwani okuthile kumelwe kuboniswe isithakazelo ngezikhathi ezithile ukuze kukhulise omunye umuntu.
ungabi naso isikhathi sakho
Olunye uphawu ukuthi nini akanaso isikhathi sokuba nawe. Uma uyidinga, uma uyifuna, uma ufuna ukwenza icebo futhi ingafiki, ifana nokungabi nantshisekelo. Impela yenza izaba zokungezi eceleni kwakho, ngoba umuntu ohlale efuna ukukubona uzokwenza konke okusemandleni ukuthi abe eceleni kwakho.
Awuseyona into ebaluleke kakhulu kubo
ngokuqinisekile kakade akunandaba ukuhlala nawe njengenjwayelo. Kukhona nezikhathi lapho kukwenza uphatheke kabi uma ucela isikhathi esengeziwe ndawonye. Uze uzizwe sengathi uyancenga.
Kukhona isikhala esiningi phakathi kokuvakasha ngakunyeUze anyamalale izinsukwana futhi uhlale ematasatasa. Uma umjikijela ebusweni kungase kube nokungqubuzana noma akanandaba nokuthi kwenzekani.
Izinhlelo zesikhathi esizayo ziyashabalala
Lezo zinhlelo zesikhathi esizayo ezabelwana ngazo sebekhohliwe. Uma kungasekho kukhulunywa ngokuhlala ndawonye, ​​uma kungasakhulunywa ngezingane ezizayo ngisho nokucobelelana ngezinto ezithile, kungenxa yokuthi ubuhlobo buyaphola. Futhi, uma uzama ukukhuluma ngakho angase athukuthele futhi lokho kuzokukhungathekisa.
Ziningi izincazelo ezingaholela ebuhlotsheni obushabalalayo. Njengoba sesichazile, intshisekelo yiyona ekhona kulolu chungechunge lwemicimbi. Isampula yenza konke futhi ngokuqinisekile ayikwazi ukufihlwa kuzo zonke izici. Ngaphezu kwakho konke, kufanele azibuke kahle, uma ngempela kukwenza uzizwe kabi futhi kunalokho ungakhethekile, kungenxa yokuthi lowo muntu akakuqapheli ngothando.
Phakathi kwezithakazelo kanye nezici ezinhle, kungaba ukubuza ukuthi usuku lwakho luhambe kanjani, ukubala kuwe nganoma yisiphi isinqumo, ukukhombisa leso sifiso sokukubona nganoma yisiphi isikhathi ngisho nokukhuthaza imibono yakho ngezimpendulo ezingezinhle noma ezinhle, kodwa njalo. ukukhulisa uthando nokwesekwa. Uma le mithombo eyinhloko ihluleka, khona-ke kungenxa yokuthi akakuthandi ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Uma indoda ingakuthandi iziphatha kanjani?